Jijiga: Socdaalka Manasheegad – Rasaasa News
Jijiga: Socdaalka Manasheegad
Safar naxdin leh, socoto handdad, shacab salalay, sawiro beenaa wax ku samaan maayo. Dadalka Shacabka waxaan marka kowaad u mahadnaqaynaa Madaxwaynaha, marka labaadna Eebe Wayne ………
TOYOTA V8, Hilux iyo Pick up dheeraysa dhankii loo dhaqaajiyaba dhaqaale ma aha, laakiin waxay dalxiis u tahay ninka ku guda jira ee muraayadaha ka xidhay boodhka, kulaylkana ka shitay qaboojiyaha [air conditioner], kolka uu ka dagan boodhka iyo cadceeda ka xidhay muraayado madow [sun glasses].
Socdaalka loo bixiyey manasheegad, waxaa weheliya gawaadhi Pick up ah oo ay ka buuxaan ma naxayaal cadow u ah shacabka degaanka Somalida Ogadeeniya LB, oo kolka ay wadada ku soo gaadhaan duqa ooman oo la socon la,a kildhiga waysada ah ee garabka u sudhan inta laga tuuro lagu odhan UBAY, ka leexo wadada. OGaal la,aan Odaygu wuxuu ku jawaabi UBO ma aha waa KILDHI!
Waxaa kale oo safarka la socda dhalinyaro aan indho iyo dhago kale aan ahayn oo aan ka ahayn CAMARA-da garabka u sudhan. Kuwaas oo si hal-haleel ah ula beegsada sawir dhaqaaq kasta oo uu sameeyo BOSS-ku. Waxaa ka mid ah su,aalaha sawir qaadayaasha BOSS-ku waydiiyo Waryaa, meel hebla ma duubteen, jawaabtu waa haa, ileen geed ma dhaafee.
Ka hor inta safarku uusan gaadhin tuulooyinka la marayo,waxaa buulasha baadha Manaxayaasha LB, kuwaas oo dadka dibada u saara baadhida ka hor. Kolkaas ayay LB-gu dadka u sheegaa in ay u diyaar garoobaan soo dhawaynta BOSS-ka. Fariin baa fooniyaha lagu diraa AABO waa diyaar.
Waxaa si kadis ah tuulada u soo gala safarka oo boodh iyo argagax ku abuura caruurta iyo haweenka, kuwaas oo oohin isku dara, aamusa la idinma dilayo waa wafti biyo iyo buskud baa la idin siin LB baa saas u sheega, ama oohintaba waa lagu celin.
Waftiga safarka ah ayaa caruurta xabad xabad buskut ah iyo quruurad quruurad biyo ah siin, korna u qaadi, kolkaas buu Boss-ka laftigiisu qiiroon.
Bal warama soo biyo la idinma siin, soo LB sonkor iyo daawo idinma siin, Jawaabtu waa HAA AABe, ciroolaha ayaa sidaas ku tiraabi. Ma i garanaysaan, HAA AABe, xageed igu aragteen, Jijigaan tagay oon kugu arkay adigoo telefishinka dhexe socda. KAH KAH……
Waxaa xagal walba sawir ka qaadaya sawirqaadayaasha, kolkaas ayaa la odhan soo ma dhamayn, HAA AABe.
Dhaqaaq aan caadi ahayn ayaa 4Wheel Drive hal mar bareega looga boodi, kolkaas ayey fidho is xidhi reerka, qaar ka mida dadka ayey madax kaga dhici dhagxaanta ay taayiradu tuuraan, YAASE OGG EEBE WAYNE!
Argagga iyo gababo ayuu cirooluhu bisinka hoosta ka boobi, EEBOW na badbaadi, EEBOW na badbaadi.
Maalmo ka dib waxaa xarunta degaanka soo gaadhi safarka Manasheegad. Waxaa TV-ga laga siidayn sawiro kooban oo markhaati fur ah. Filim qorayaasha ayaa lagu amri in ay sawirada isku kab kabaan inta fiican. Tijaabo badan, maalmo ka dib, waxaa Tv laga soo dayn mashaariic biyood oo la furay iyo shirar lala yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan.
Filimada socdaalka manasheegad ayaa mudo labo todobaad ah dharaar iyo habeenba lag siidayn TV, masuuliyiinta ayaa qaadka ku cuni daawashada filimka manasheegad, kuwaas rixiya rixin aan haynin.
Ethiopian Farmer Gets Legal Aid From UK to Sue UK Over Aid to Ethiopia
US trip forbidden, Ethiopia opposition figure says